Cocochoco yi-keratin izinwele Ehlala: Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
izinwele langa ecwebezelayo, njengawo ku lingaphandle umagazini fashion, ufuna ukuba cishe njalo intombazane yesimanje, kodwa akazange ukuphatha kuzuzwe umphumela onjalo kusho ngakwesokunene noma amashampu ezibizayo. Lokhu kudinga amathuluzi professional, ezifaka hlangana ukuhlahluba yi-keratin COCOCHOCO, uyakwazi ukusiza esikhathini esifushane ukufeza umphumela eside elindelwe. Umuthi ekhiqizwa yinkampani Israeli ngokuthi Global Izimonyo, kuba ethandwa ithuluzi eqondisa izinwele anoma yiluphi uhlobo.
ukuphathwa yi-keratin uqobo, njengoba yaziwa, kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele izinwele ekhaliphile ngokuphelele bushelelezi, kodwa ngesikhathi esifanayo has bokwenza eziningi, ezivame kungagcini wizadi engiwenzayo noma amathuba agijimela Ukwakheka inkohliso.
Tangled futhi izinwele engalawuleki kuyinkomba ngqo Ehlala yi-keratin kanye nokwelashwa. Le nqubo enikeza ngempela nethonya emangalisa, okwenza sivala kubonakale bushelelezi, acwebezelayo futhi ukulawuleka, futhi okubaluleke - Akudingi ukunakekelwa okukhethekile.
izinwele yi-keratin eqondisa Cocochoco kakhulu efana wokucwebezelisa, ukuhlolwa noma laminating. Kodwa naphezu eziningi ezifanayo, banayo umehluko oyisisekelo, futhi izinzuzo ukuthi ziyafezeka sibonga engashiyi ingxube.
Inqubo, esetshenziselwa COCOCHOCO yi-keratin, kungafaneleka ezimweni ezinjalo:
imicu ngokuqhubekayo bedidekile futhi hhayi ayesebenza ngaphandle isicelo ngaphambi balsams, izifutho ekhethekile nokunye;
staining isikhathi eside;
izinwele zinyakaze noma pushatsya ukuthi kubuhlungu ikakhulukazi sezulu ezimanzi;
izinwele ulahlekelwe kukhanye yemvelo futhi bheka inobudlabha;
emva ukugeza izinwele imicu kancane ukuze ome futhi qondanisa utjuzhkom.
Kungenxa lezi zimo kusiza umugqa kwamathuluzi professional kusukela brand Israeli. Abakhiqizi ngokwabo yi-keratin Cocochoco ukuqinisekisa yokutakula, ukwelashwa, zokuvimbela kanye nokulungisa.
Yi-keratin ingasetshenziswa yini ngokuphepha i nezinwele ezinde ngaphambili afakwe imithi yokuwahlanza, nakuba imikhiqizo yalolu hlobo kusuka kwamanye abakhiqizi akunconyelwe ezidayiwe, ukuphupha kanye waqonda amakhemikhali izinwele fashion.
Yi-keratin kuyinto Cocochoco uyazonga ejenti. Ngenxa yalesi umnikazi curls emva isicelo sokuqala ukuhlukana Fluffy futhi uthole wave enhle, kodwa ngeke ukwazi ukufinyelela isandiso egcwele.
Yi-keratin Cocochoco: Ukwakheka kanye nezinzuzo
Yi-keratin Abakhiqizi bathi ngemva kokuphila isikhathi ekululameni kanye nokwelashwa zithako Izinwele umphumela uzoqhubeka isikhathi eside - kusukela ezinyangeni ezingu-6 kuya onyakeni, kodwa angaphansi kwemithetho lokunakekela.
Yi-keratin ngoba Cocochoco izinwele siqukethe le izingxenye ezilandelayo:
Olufile amaminerali, laziwe kubo bonke ngokuphulukisa yayo izakhiwo;
ezikhishwe of amakhambi ehlukahlukene izitshalo zokwelapha;
Ukuvikelwa ezishisayo, okuyinto akuvumeli imicu zome ngaphansi kwethonya okushisa aphezulu kakhulu;
yemvelo yi-keratin imvu uvolo, okuyinto ezikwazi ukuhlaba zingene nigcwalise ngaphakathi kwezinwele;
asidi i-hyaluronic, esinikela humidification curls.
Ngenxa leli thuluzi Ukwakheka ingasetshenziswa hhayi kuphela ukuze qondanisa imicu, kodwa futhi ngoba ekusimameni, ukwelashwa nokuvinjelwa. Inzuzo ebalulekile izidakamizwa uyakwazi ukusebenzisa isakhiwo esifanayo yezinhlobo ezahlukene izinwele.
Ukusebenzisa ukwakheka "Kokochoko" - inqubo akuyona ezishibhile. Qalisa kungenzeka hhayi kuphela nokucwala professional, kodwa futhi ekhaya. Yiqiniso, okokuqala kungcono uthintane onguchwepheshe ukuze ufunde indlela ukwenza inqubo, ungawoni izinwele zakho self-ukulungiswa kwananoma.
Izindleko inqubo endlwaneni eyakhiwe kuyoba ruble cishe 5 kuya 8000. Nokuzibona ukulungiswa kwananoma futhi ukwelashwa ekhaya kuzodingeka uchithe imali okuningi njengoba kuyadingeka ukuthenga izimpahla eziningana kulo mugqa.
Izinyathelo for ekulungiseni
Manje sekuyisikhathi sokuba uthole ukuthi ufuna ukusebenzisa Cocochoco yi-keratin. Sebenzisa of ticondziso letilula:
Shampoo imoto line efanayo.
isicelo ngokucophelela ukwakheka ngayinye umucu ngamunye.
Ecwaninga ikamu ngokulinganayo ukusabalalisa izidakamizwa.
Kushelele utjuzhkom lokushisa 230 degrees.
Inqubo kuthatha cishe 4-5 amahora. Isikhathi incike isakhiwo, ukujiya kanye nobude izinwele.
Uyabakhathalela ngemva eqondisa
Lapho inqubo kuphumelele, musa uphumule, ngoba ezinsukwini ezintathu zokuqala emva kubalulekile ukugcina imithetho lokunakekela:
abazigezi ikhanda lakho;
Ungayisebenzisi izinwele omfisha, amabhande asekhanda, elastics nezinye enhlobonhlobo zokuhlobisa;
ke akudingekile ukuvumela umswakama izinwele;
ke akudingekile ukugqoka cap (ingcosana, ungakwazi ukushintsha hood).
Zingakadluli izinsuku ezintathu, emva inqubo, izinwele kumele sichithiwe.
Izinzuzo esemqoka izinwele Ehlala nokululama izinqubo kungabandakanya:
izinwele enempilo futhi ucwebezela ngokwemvelo;
ukufakwa ngasinye okwalandela kuphela badinga hairdryer, hhayi eningi namanye amathuluzi asetshenziswa ngaphambi inqubo;
imicu ithambe ngaphezulu, abushelelezi futhi ukulawuleka;
njalo inqubo entsha uyokwelula umphumela inhloko izinwele kuze kudlule isikhathi eside unempilo futhi enhle;
ukuphathwa yi-keratin ilungele abantu abafuna sikhule nezinwele ezinde futhi azisebenzi yokugunda njalo yokuhlukanisa uphela.
Ngaphezu izinzuzo, kanye nanoma yikuphi inqubo kwenziwe kanye izinwele yi-keratin ukwelashwa Ehlala, futhi ine yokuntula ezithile:
Akuwona wonke intombazane angaphila izinsuku ezintathu ngaphandle ukugeza futhi izinwele Ukugunda;
emva ukudaya noma ukudaya yi-keratin okuholela umphumela ubizwa baphelelwa noma ingxenye;
ngenxa isidingo usuphinda izikhathi eziningana ngonyaka kufanele uchithe imali eningi.
Ukuze sifeze inqubo bebodwa ekhaya, ngeke kwanele yi-keratin wedwa. Qiniseka ukuthenga esebenzisa line efanayo, kanye kumadivayisi angeziwe:
imoto, senzelwe yokuhlanza obunzima, walala;
siqu isakhiwo yi-keratin;
utyuzhok dryer kanye Titanium camera;
A ibhulashi ekhethekile sokusebenzisa Ukwakheka kuya izinwele;
ekulinganiseni inkomishi kanye esitsheni zizalela yi-keratin;
Cape emahlombe (yesikhathi esisodwa kungenzeka);
imoto, ne engekho sulfate lichaza ekwakheni;
imaski Professional olwakhelwe ukunakekela izinwele emva yi-keratin ukwelashwa eqondisa.
Kuze kube manje, emgqeni kusho "Kokochoko" angathengwa ngasiphi izimonyo esitolo. Konke lokhu kuyodingeka ichithe ama-ruble angaba yizinkulungwane 10.
Ukwenza yi-keratin inqubo indlu kufanele ibe ukulandelana elandelayo:
Ngigezisise izinwele zakho nge imoto for yokuhlanza ezijulile emhlabeni 2-3 izikhathi.
Sisule dryer izinwele kanye nekama ngokucophelela.
Hlukanisa zonke izinwele yaba izingxenye ezine, ezintathu zazo zigundiwe, kanti owesine - kudingeka lihlukaniswe imicu emincane (1 isentimitha).
Sebenzisa Ukwakheka ukuba umucu encane lilinye, ngaleyondlela kwenze kokuhamba izimpande ncamashi 1 isentimitha.
Umonakalo yi-keratin basakaza kanye ubude lonke ikamu, benaka ekhethekile kuphelile.
Ukwenza lo msebenzi nazo zonke imicu futhi ushiye ukuze ome imizuzu engu-40 at Igumbi lokushisa.
Lapho isikhathi ukuze ome dryer izinwele ngaleso lokushisa aphansi.
Nekama bahlukanise zonke izinwele zibe izingxenye ezintathu alinganayo.
ingxenye ngayinye yadabuka utjuzhkom (ncamashi 230 degrees).
Lapho isinyathelo sokugcina kuyadingeka kumelwe uqaphe kakhulu. Utjuzhkom aphethwe esigabeni ngasinye kufanele kube izikhathi okungenani 5, ngoba endabeni eqondisa yi-keratin mhlawumbe inani ezinikezwa likhulu ukwedlula evuthayo ayina ukubambezeleka on izinwele.
Kuze kube yimanje, ukulungiselela best kule ndawo yaziwa njengenye yi-keratin Cocochoco Gold. Lokhu kusho premium ikhambi ephelele kwabesifazane Kuyaphuthuma sokubuyiselwa futhi izinwele eqondisa. Yi-keratin uyakwazi ukuvusa umuntu izinwele kancane ziyaqothuka kakhulu, omile futhi abangalawuleki ezazibonakala ukulondoloza isivele engenakwenzeka.
Lo mkhiqizo eziyojatshulelwa a lady weqiniso, futhi abameleli ubulili namandla, ngoba izinkinga izinwele khona abantu abaningi, kungakhathaliseki ukuthi umuntu mdala noma ubulili.
Cocochoco Gold - yi-keratin, okuyinto libuyekeza nje ngeke likwazi ukuthi limbi. Yena bayamangala abathengi ifomula eliyingqayizivele futhi amakhono ayo Amazing. Lokhu kusho ukuthi kuqinisa izinwele, bazogcwalisa nabo umswakama ngokwanele, smoothes futhi ubuyisela. Sinazo zonke lezi zinzuzo yi-keratin u-Adalberto isikhathi eside igcinwe endaweni yokuqala, futhi uthola nsuku zonke inkulumo yakhe eningi imibono emihle.
Yi-keratin Cocochoco: umthengi Izibuyekezo
Imikhiqizo kusukela umakhi Israeli ngokuthi "Kokochoko" ubanjwe on ngokushesha ngokwanele. Zonke izibuyekezo ngemikhiqizo lokhu brand ziyancipha yokuthi lapho elithenga kubaluleke kakhulu ukuba iyangena-mbumbulu. Uma umkhiqizo akulona yokuqala, ke kuyoba obonakalayo emva ukusetshenziswa, njengoba akukuniki siletha imiphumela efiselekayo, noma ngisho kancane konakalisa izinwele eziyinkinga kakade.
Abantu abathenga ukwakheka yi-keratin ezitolo ezinkulu (ekhombisa ubuqiniso balo), ujabula ngayo yonke into. Ngo Izibuyekezo abashisekayo basuke kalula isetshenziswa izinwele, ngokuvumela lula ekhaya ukwelashwa, futhi ngenxa yalokho ikunika yi Amazing. Ngemva kokusetshenziswa kokuqala kwe-izinwele yi-keratin ngempela babe ngqo bese kukhanye, okuyinto ebingekho ekuqaleni.
Ububi kuphela amakhasimende abesifazane bathi iphunga ezingemnandi kokuqanjiwe. Kodwa lokhu ehilelekile awubhekene okubuyayo, ngoba ukubekezelela lokhu kunuka kuyodingeka amahora kungekho kuka 4-5, futhi umphumela izimali labetibambile izinyanga ezingaphezu kweziyisithupha.
Ikhanda elithakazelisayo lezinwele ezibukhali obude obude
Izinwele Kungani abacaphuni
Ukusetshenziswa glycerin ka glycerin ezweni lanamuhla
Kuyini tuesok amagxolo?
Siyaqonda izandla kungani ndikindiki ebusuku
Drilling futhi umshini Ukufakwa nge CNC ekukhiqizeni ifenisha
Lasekuqaleni isidlo kuze kube iholidi ngaphambi: irayisi kanye nezimfanzi